स्वास्थ्य Archives - Naya Pusta
Naya Pusta २०७५ फाल्गुन ८ टिप्स, स्वास्थ्य
एजेन्सी । चम्किलो र मुलाय कपालको चाहना सबैको हुन्छ। तर हावाका कारण कपाल रुखो हुनाले सुन्दरता समेत बिगार्ने गर्दछ। कपालको समस्या धेरैको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ। कपाललाई मुलायम बनाउनका लागि विभिन्न केमिकल समेत प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। तर यसले कपाललाई नरम बनाउनुको साटो झन रुखो बनाउने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई रुखोपना
हामी धेरैले अपानवायु छाड्छौँ । पेटमा जति धेरै ग्यास भरिन्छ, उति मात्रामा ग्यास निस्कने हो । हाम्रो खानपानकै कारण पेटमा ग्यास उत्पादन हुन्छ । खानपानमा ख्याल गरेमा ग्यास भरिने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । कारण -खाना हतारमा खानुहुन्छ भने अबदेखि बिस्तारै खाने गर्नुहोस् । हतारमा खाना खानेहरूमा एसिडको मात्रा बढ्ने र यसले
यस्तो अवस्थामा भुलेर पनि नखानुहोस् दही, जानसक्छ ज्यान !
दही स्वादिलो पेय हो र गुणकारी पनि। दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ। गर्मीमा दहीले तिर्खा पनि मेट्छ। तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ। दही स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक चीज हो यसमा कुनै शंका छैन र यसको आफ्नै आयुर्वेदिक महत्व पनि छ। दहीमा प्रचुर मात्रामा क्याल्सियम हुन्छ
बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, नत्र
काठमाडौँ । स्वास्थयलाई ठीक राखिराख्न हामीले धेरै प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । यसका लागि हामी व्यायाम गर्छौं। राम्रा राम्रा कुराहरु मात्र खान्छौ। यसरी हेर्दा त हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या नै नआउनुपर्ने हो। तर, कुन खानेकुरा कतिबेला खाने भन्ने जानकारी नहुँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको हुन्छ । कुनै खाद्यान्नमा सामग्रीमा एसिडको मात्रा बढी
सुन्दर रहन कुन भिटामिनको के भूमिका हुन्छ ?
Naya Pusta २०७५ फाल्गुन ७ Darshan, स्वास्थ्य
एजेन्सी । छालालाई पुन मर्मत गर्न भिटामिन एको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भिटामिन ए खानेकुरामार्फत प्राप्त गर्न खानामा ब्रोकाउली, एभोकाडो, सख्खरखण्ड, गाजर, पालुङ्गो, तरबुजा वा खरबुजा नियमित सेवन गर्नुपर्छ। भिटामिन बी स् भिटामिन बीमा नायसिनआइड नामक तत्व पाइन्छ जुन मानिसका लागि अति नै गुणकारी हुन्छ । भिटामिन बीयुक्त क्रिम तथा लोसनले
भातको माडले यसरी बनाउनुहोस् अनुहारलाई चम्किलो र मुलायम
Naya Pusta २०७५ फाल्गुन ६ टिप्स, स्वास्थ्य
अहिले अनुहार चम्किलो बनाउन, नरम बनाउन वा समग्र अनुहारको सौन्दर्यमा निखार ल्याउनका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्दैन । बजारमा भनेजति सौन्दर्य प्रशाधन छन्। अनुहारमा लगाउने थरीथरीका क्रिम छन्, जो सौन्दर्य बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। तर, यस्ता क्रिममा रसायनको मिश्रण हुन्छ। यसले प्राकृतिक सौन्दर्यलाई भने नष्ट गर्छ र अनुहारमा कृतिम सुन्दरता दिन्छ ।
बाह्रै महिना बजारमा पाइने स्याउ स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । फाइबरयुक्त स्याउमा भरपूर फाइब्रोन्युटि्रएन्ट पाइन्छ, जुन हृदयका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । स्याउमा एन्टि-अक्सिडेन्ट तत्व हुनुका साथै भरपूर मात्रामा क्याल्सियम पाइन्छ, जसले हड्डीलाई मजबुती प्रदान गर्नुका साथै टुट्नबाट समेत बचाउँछ। स्याउले शरीरमा कोलेस्टेरोलको मात्रा घटाउनुका साथै सुगरलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ ।
धेरै समय दूध उमाल्दा हुनसक्छ यी साइड इफेक्ट
Naya Pusta २०७५ फाल्गुन ६ February 18, 2019 टिप्स, स्वास्थ्य
गाईभैंसीको दूध हामी पोषणका लागि सेवन गर्छौं । गाईबस्तु पाल्नुको प्रयोजन नै त्यसको दूध हो । दुधलाई शुद्ध र उत्तम पेय पनि मानिन्छ। अक्सर हामी दूध उमालेर सेवन गर्छौं। दूध उमाल्दा त्यसमा रहेको सुक्ष्म जीवाणु नष्ट हुने गर्छ । तर, दूधलाई बारम्बार उमाल्नु स्वास्थ्यका लागि भने हानिकारक हुनसक्छ। दूधमा शरीरका लागि
Naya Pusta २०७५ फाल्गुन २ स्वास्थ्य
काठमाडौं । शुरुका दिनहरुमा साथीहरुको लहलहैमा लागेर चुरोट सेवन गर्ने सिकेपनि पछि छोड्न सकिरहेका हुँदैनन्। चुरोटको सेवन छोड्ने धेरै तरिकाहरु छन् । ती मध्ये कुनै एक कुरामा प्रतिवद्ध हुनुपर्छ। यस्तै चुरोट छोड्नका लागि परिवार र आफन्तको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । चुरोट छोड्ने बेला पुनः खान मन लागेमा के गर्ने भन्ने
घरमै यसरी बनाउनुस् स्वादिलो सक्खरको खीर (विधि सहित)
Naya Pusta २०७५ माघ २७ टिप्स, स्वास्थ्य
अहिले पर्वको माहोल चलिरहेको छ । तपाईं मीठो खाने सोच बनाइरहनुभएको छ भने सक्खरको खीर बनाएर खानुस् न त । यो स्वादिलो हुनुका साथै बनाउन पनि सजिलो छ। सामग्री चामल १०० ग्राम पानी आवश्यकताअनुसार घिउ दुई ठूलो चम्चा काजु १० वटा किसमिस दुई ठूलो चम्चा दूध एक लिटर अलैंची धूलो आधी सानो चम्चा सक्खर १२० ग्राम पानी ११० मिलिलिटर बदाम सजाउनका